5 Best Ogwe na Live Music Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Ogwe na Live Music Na Europe
Ogwe na ndụ music gbapụta n'ebe nile Europe, àjà a ụzọ igbu oge a na; ebe ọṅụṅụ na songs igba free. Ọ bụrụ na ị na-achọ inwe anụrị n’obodo n’obodo n’oge gị ụgbọ okporo ígwè njem, anyị nwere aro ụfọdụ. Ebe a na-anyị n'elu 5 Ogwe na ndụ music nile Europe:
1. Live Music Mgbe The Record Shop, Paris, France
Dekọọ Shop bụ otu nke kasị mma Ogwe na ndụ music na France. Ọ bụ nnọọ dị n'èzí Bastille Metro ojii. Ọ bụghị nanị na ọ bụ mfe iji, ma ọ dịkwa nnọọ mma. The mmanya bụ na n'ihu, na o nwere ezigbo egwu egwu ogbo na azu nke ebe egwu, with the audience space hidden behind it.
obodo nwere ike ikwu na-a ndoputa ma ọ bụrụ na ịga na ndụ music mmanya bụ na gị ndenye aha njem. N'ihi na ntinye bụ free, ọ pụrụ isi ike iji nweta a oche na mmanya. Ozugbo ị bụ na, ị ga-enwe ike ibi niile Genres nke music, kpamkpam ndụ.
2. Live Music Mgbe Liquid, Luxembourg City, Luxembourg
Ihe na-akpali mmanya na ndụ music na nso nso-etinye Luxembourg na map nke European nightlife. Liquid Cafe na emi odude ke sinik Grund ebe Luxembourg. Ọ bụrụ na i nwere ma mmanya aṅụ na craft biya ndị hụrụ njem gị party, na nke a bụ ebe ọ ga-.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ekpori a nnọọ obere ọnụnọ ke Luxembourg, ị ga-abụ na-enwe ike iji jide ndụ music na-egosi na Liquid na Tuesdays na Thursdays. Ọ bụrụ na ị na-na na a weeknight warrior, na nke a bụ ebe ị na-.
Munich ka Amsterdam Ụgbọ oloko
3. na Walls, Rome, Italy
Ị pụrụ ichetụ achọta a ọhụrụ obodo mmanya na ndụ music ileta ọ bụla n'abalị mgbe gị European ezumike? Tinye na Walls, otu n'ime Rome kasị kpara ndụ music Ogwe, na gigs ọ bụla n'abalị.
The mmanya si akụkọ ihe mere eme ebe ziri ezi obi nke San Lorenzo amụrụ ebe pụtara na ị ga-enwe ike izute ọtụtụ na-akpali obodo. n'ozuzu, maka ezigbo Roman ahụmahụ, Le Mura bụ a kwesịrị-nleta - ọ bụla n'abalị nke izu.
4. The Sisserou, London, Great Britain
O doro anya na, Idris Elba maara nke Efrata ikpokọta n'ime a mma mmanya na ndụ music. Ya okomoko mmanya, The Sisserou, na emi odude ke Aldwych na-enye ihe nanị ahụmahụ.
Mgbe ulo gbalaga na-esetịpụrụ ndị ogbo na mma arụmọrụ, ị na-achọghị ka uche Mr. Elba na mgbe DJ tent. Nke ahụ ziri ezi - na Hollywood omee na-ewe akụkụ ke fun site n'ịrụ DJ tent, na mmanya patrons 'ụtọ. Gbaa na-acha cocktails dịtụrụ ọnọdụ n'ihu na a okpomọkụ nnụnụ na-themed ndụ music mmanya.
5. The Waterhole, Amsterdam, Mba netherland
Iji obi ụtọ nke njem nleta na obodo ndị hụrụ nke a ndụ music mmanya, The Waterhole anọwo na n'ihi na ihe karịrị 25 afọ. Mgbe ọ bụla ị gaa na Amsterdam, ọ ga-enwe ihe na-enye gị, ọbụna n'ụbọchị. On a anwụ na-acha ụbọchị, e nwere ihe dị mma karịa atụrụ ndụ na mmanya nke sara mbara Ofel.
Ọ bụrụ na ala nke ohere dị elu na gị na ndepụta nke na-ebute ụzọ, The Waterhole ewe okpueze maka kasị mma mmanya na ndụ music na Amsterdam. N'ihi na nke etiti ebe, ọ na-emekarị jupụtara. Ọzọ mere ìgwè mmadụ hụrụ ya n'anya bụ obi ụtọ hour, nke dịruru ruo mgbe 9 PM!
A nleta ọ bụla nke Best Live Music Ogwe bụ n'ụzọ zuru okè na-amalite ma ọ bụ kwụsị gị Europe Train Njem, ka AKWỤKWỌ gị tiketi Ugbu a!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Ogwe na Live Music na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)